Saddexda Teknoolojiyada ee Tijaabada ah oo ka yar $ 100 loogu talagalay aabaha iPad-jecel
Gadashada Guides Tablets
Dadku way ka baxayaan wax badan. Waa maxay sababta uusan u iibin wax qabow ah?
Ma waxaad raadineysaa hadiyad wacan ee aabaha iPad jecel noloshaada? Maalinta Aabuhu maahan inay ahaato mid ku saabsan suufka, isku xirka iyo kalluumeysiga cusub. Waxaa jira waxyaabo badan oo raaxo leh oo aad u fiican oo ku dhisi doona hadiyadaha Maalinta Aabaha ee Weyn, oo leh qiimaha ka jira meel kasta oo ka soo gala $ 50 illaa $ 200. (Miyuu u baahan yahay iPad ? Akhri tan!)
Dadku waxay jeclaan doonaan waxa ugu wanaagsan ee ugu wanaagsan iPad-ka. Waa maxay sababta Apple TV-ga oo aad u qabow? Sababtoo ah waxay u sahlaysaa iPad inuu ku xirnaado TV-ga isagoo aan isticmaalin fiilooyin. Isticmaalka AirPlay iyo Mirroring Mirroring , waxaad u diri kartaa wax kasta oo ku yaal shaashadda iPad-gaaga HDTV-gaaga. Iyo barnaamijyada qaarkood sida Netflix waxay ku taageeraan video on iPad, taas oo macnaheedu yahay inaad hesho sawir ku habboon TV-ga halkii laga beddelan lahaa si loogu rakibo telefishankaaga.
Qiimaha: $ 99.99 More »
Fikrad ka baxsan Stabile 2.0 iPad Stand
Anigoo ah aabe, waxaan ka fogaaday in aan qoraalka kumbuyuutarka ama kumbuyuutarka ku dul qoro liiskan. Ka dib oo dhan, kumbuyuutuna waxay u egtahay in ay shaqo u socoto, hadiyaddu waa inay noqotaa ciyaar. Si kastaba ha noqotee, aabaha leh khadad caan ah (ama si fudud u jecel yahay inuu iPad u isticmaalo fiidiyoow badan), iPad-kii aad u wanaagsan wuxuu noqon karaa hadiyad weyn. Waxaa jira suuqyo ka raqiisan Stabile 2.0, hase yeeshee aad u yaryar.
Qiimaha: $ 49.99 More »
Kaadhka Gift of iTunes
Inkastoo ay suurtagal tahay in la siiyo arji , si aad marwalba ugu noqotid Infinity Blade 2 ama Kalluumeysiga Nacnaca, Kaarka Gift Gift ee iTunes wuxuu u oggolaan doonaa inuu go'aan ka gaaro barnaamijyada, cayaaraha, muusikada, filimada ama buugaagta.
Qiimaha: $ 15
Miyuu Qaadi Karayaa E-Reader si Lacagta Lagu Badiyo Buugaagta?
Tilmaamaha Miisaanka iyo Miisaanka
Kuwa ugu fiican u gudbiya fiilooyinka iPadka
Guryaha ugu Fiican iPad-ka
Miyuu iPadka kuu sax yahay?
IPad Air iyo Samsung Galaxy Tab Pro
Qalabka Guitar ee ugu Fiican iPad-ka
Tusaha iPad-ka ee loo isticmaalo: Sida Loo Dhigayo iyo Habkee Loogu Gadan Karo
Aqoonsi E-Kale oo Kale
Sida ugu dhaqsaha badan u xajiso Macadkaaga
Cayaartoyda ugu wanaagsan ee Qodobada Qurux Badan ee Android
Sidee loo wadaagaa Rinjigaaga 3D abuurista Facebook
Sidee loo wadaagaa heesaha Windows Media Player 12
Heer-kulka iyo TV-gaaga
Code Reader Vs. Qalabka Sawirka
Maxay tahay Minecraft? - Xaqiiqdii ma tahay ciyaar?
Sida loo furo Layliga hore ee Sawirka
Diyaargarowga Batroolka Maalin Maalmeedka Shaqeeya?
Sidee loo Isticmaalaa Xarumaha Muuqaalka Virtual Style ee Windows 10
Sida loo bilaabo Aurora HDR 2017
Caymis Ku ilaali oo ku dhaji emailkaaga Windows
Tilmaamaha loogu talagalay xisaabta cusub ee Outlook.com Email
Tusaale ahaan robots.txt Files for Your Website
Waxa la Sameynayo Marka Ilmahaaga uusan soo laabanayn
Liiska & Waxyaabaha ku Saabsan Qaadashada iPhone kasta
Fujifilm X-A2 Dib-u-eegida Sawir-gacmeedka
Barnaamijka ugu fiican ee Tabeelka Android